क्षेत्रीलाई प्रशंसै प्रशंसा | We Nepali
२०७१ असार ८ गते १०:००
दौरा सुरुवाल, नेपाली ढाका टोपी, कालो कोटमा सजिसजावट । हेर्दा सामान्य तर हसिलो मुहारका एक जना मानिस सबैका आकषर्ण थिए । उनकै प्रसंसा हुदै थियो सातौ गणतन्त्र दिवसमा ।
‘काम गर्न इच्छा शक्ति चाहिन्छ, त्यो कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीमा देखिएको छ, म उहाँको काम गर्ने इच्छा शक्तिको प्रसंसा गर्छु’ दोस्रो वक्ताका रुपमा ड्यासमा मन्तव्य राख्न बोलाइएका प्रवासी नेपाली मञ्च, बेलायतका अध्यक्ष रामशरण सिंखडाले भने ।
सिंखडाको वोलीमा सबैले समर्थन थप्दै गए । त्यति मात्र कहाँ हो र , गैरआवासीय नेपाली संघ, बेलायतका अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीले त एनआरएनए, बेलायतका संरक्षक प्रा.डा. सूर्य सुवेदीका हातबाट खादा र प्रमाण पत्र समेत दिन भ्याए । फोहोरको थुप्रो जस्तो बनाइएका थोत्रा सामानले भरिएको दूतावास हललाई कार्यवहाक राजदूत क्षेत्रीको सकृयतामा सातौं गणतन्त्र दिवस बनाउन योग्य बनाइएको रहेछ । त्यसमा पनि पेन्टिङ गरि चिरिच्याट्ट पारिएको रहेछ ।
अनि यो बाहेक, नेपाली दूतावासको अघिल्लो भागमा रहेको फोहोर पनि पानीद्धारा सफा गरिएको रहेछ । निवर्तमान राजदूत डा. सुरेश चालिसेले विक्रीमा राखेको राजदूतावासलाई रंगरोगन गरि बेहुली झैं सजाउने काम उनले गरेछन् । त्यसैले उनको कामलाई प्रा सुवेदीदेखि सिंखडासम्मले प्रसंसा गरेका रहेछन् । ‘सरकारी बजेटमै सबै काम गरेको हु’, कार्यवहाक राजदूत क्षेत्रीले वी नेपाली डटकमसित भने, ‘मैले संयोजन मात्र गरेको हु । तीन करोड सरकारी बजेटमा राजदूतावासलाई सजाउने र फेरी भत्कियो भने बनाउने इन्स्योरेन्स समेत गरेको छु ।’ उनकाअनुसार त्यति गर्दा पनि अझै पुरा बजेट खर्च भैसकेको छैन् ।
राजदूत क्षेत्रीले बेलायतस्थित संघसंस्थासँग संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालीका हितका आगामी दिनमा काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । यसअघि सातौ गणतन्त्रका दिवसका अवसरमा प्रा सुवेदी नेपालमा राष्ट्रिय संकर्णितावाद फस्टाउन लागेकाले सचेत हुनु पर्ने बताए । ‘नेपाली विवादवाट माथि उठेर नयाँ संकल्प गर्नु पर्ने दिनका रुपमा गणतन्त्र दिवसलाई लिनु पर्छ’, उनले भने ।
गणतन्त्र दिवसमा नेपाली राष्ट्रभक्तिका गीत पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा एनआरएनए यूके अध्यक्ष क्षेत्री, जनसम्पर्क समितिका राजकुमार त्रिपाठी, जनप्रगतिशील समाज बेलायतका रामचन्द्र मरहठ्ठा, नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतका अध्यक्ष चिरन शर्मा, समाजसेवी चिकित्सक डा. राघव धिताल, आरती श्रेष्ठ, लगायतले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना गर्ने २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सम्झना गर्दै दूतावासको अगुवाईमा शनिवार गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो ।